Nuqulo ka mid ah dastuurka Soomaaliya oo dib loo eegis Lagu Sameynayo. | Gaaloos.com
Home » News » Wararka » Nuqulo ka mid ah dastuurka Soomaaliya oo dib loo eegis Lagu Sameynayo.
Nuqulo ka mid ah dastuurka Soomaaliya oo dib loo eegis Lagu Sameynayo.
Guddiga madaxa banaan iyo guddiga baarlamaanka Soomaaliya u qaabilsan dastuurka qabyadda ah ee dalka ayaa dib u eegis ku sameeyay illaa 10 cutub oo ka mid ah dastuurka,kaddib kulan howleed muddo toddobad ah ay ku lahaayeen magaalada Nairobi.
Wasaaradda dastuurka xukuumadda Soomaaliya ayaa kulanka soo qaban-qaabisay,waxaana gaba-gabadiisa ka qayb-galay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka,Jeylaani Nuur Iikaar, wasiirka dastuurka ee XFS mudane Xuseen Maxamuuud Sheekh Xuseen iyo safiirka DFS u fadhiya dalka Kenya amb Jamaal Maxamed Xasan.
Danjiraha dowladda Soomaaliya u ee dalka Kenya mudane Jamaal Maxamed Xasan oo ugu horeyn hadalka qaatay ayaa tilmaamay in shaqo wanaagsan ay qabteen xubnaha guddiga dastuurka madaxa banaan iyo kan baarlamaanka Somalia, isagoo ku booriyay in howsha ay halkeeda ka sii wadaan.
Guddoomiyaha guddiba madaxa banaan ee dastuurka dalka Xasan Xaaji iyo wasiirka wasaaradda dastuurka ee XFS Xuseen Maxamuuud Sheekh Xuseen ayaa ka sheekeeyay waxyaabaha uga qabsoomay dastuurka iyo shaqo howleedka ay Nairobi u joogeen 2 dii todobaad ee u dambeysay.
Guddoomiye kuxigeeka 1aad ee baarlamaanka soomaaliya Jeylaani nuur iikar oo gabagabada kulanka soo xiray ayaa hoosta ka xariiqay in dhawaan dastuurka dalka la horgeyn doono baarlamaanka, waxaana uu dhinaca kale maamul goboleedyada ka jira dalka ugu baaqay in ay ka qeybqaataan sidii loo dedejin lahaa dastuurka KMG ah ee dalka.
Dastuurka KMG ah ee Dalka ayaa ka kooban ilaa iyo 15 cutub, waxaana la rajeymayaa in la dhasmeytiro kahor inta uu dhamaan mudo xilka dowlada hadda jirta.
Title: Nuqulo ka mid ah dastuurka Soomaaliya oo dib loo eegis Lagu Sameynayo.